EX - ABSDF: သူခိုးတို့၏ ဘဏ်တိုက်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း
Mizzima မဇ္ဈိမ and 8 other friends were tagged in Maha Mingyi's photo.
ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာ ခြေရာခံစစ်ဆေးနိုင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့် အဂတိချစားမှုက ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအား အံ့မခန်းဘွယ် ကွာဟကြီးထွားလာရခြင်းနှင့် အကန့်သတ် သီးခြားသတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းငယ်သော လူတန်းစားများအတွက်သာ ကြီးမားသော ငွေရေးကြေးရေးပိုင်ဆိုင် စီမံပိုင်ခွင့်အားမျက်နှာသာပေးခွင့်ပြု ထားလေ၏။ ထိုအချက်၂ချက်ကြောင့် ဆင်းရဲချွတ်ခြုံကျမှုပမာဏ တိုးမြင့်လာပြီး ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးသက်ရောက်စွာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသော ဓနအင်အား ချိနဲ့ ချို့ယွင်းသွားရသည်ဟု The Financial Time က ရေးသားထောက်ပြပါသည်။
သစ်ထူးလွင် ဆင်းရဲတဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး ဆွေးနွေး သိမ်းယူထားတဲ့ လယ်မြေတွေပေါ် ထွန်ယက်တဲ့ တောင်သူတွေကို အာ...
Htun Aung Gyaw December 12, 2013 at 4:50am “ပြည်လုံးဆိုင်ရာ စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ညီလာခံ”ကြီးသို့ ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ပြည်တွ...
ရောင်နီဦးအခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းအတွက် အရေးပေါ်ပန်ကြားချက်
လေးစားအပ်ပါသော …. ရဲဘော်၊ ရဲမေများ၊ မိတ်ဆွေများနှင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းမှပညာရေးကိစ္စများကိုစိတ်ပါဝင်စားသူများခင်ဗျား ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှစ၍ ရောင်...
Hla Moe ကိုကြီးသောင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ၀န်ထမ်းဘ၀မှာ တွေ့ကြုံရတာလေးတွေ၊ ပြင်ပလောကမှာ တွေ့ကြုံရတာတွေ၊ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ၀န်ထမ်းတယော...
Than Soe နင်တို့ကျောင်းသားတွေကလဲ ဒီကျည်ဆံလေး တဘောက် နှစ်ဘောက်နဲ့ ရှေ့တန်းကို ဆင်းလာရတယ်လို့ -- များများသယ်လာပါလား။ ငါအားမရလိုက်တာဟယ် -...
by Spring Flowers on Monday, November 12, 2012 at 10:50pm ၁၉၄၆....အီတလီမြောက်ပိုင်းက လူစီယာနာ ဆိုတဲ့ မြ...